Amafutha abalulekile kanye nemvelo ayimvelo yizinto ezinamandla eziqukethe amakhemikhali ahlukene kakhulu anezitshalo. Ngokufanayo, emaqabunga awo, izinkuni, izimbali, izimpande, izithelo, isikhumba sesithelo. Lezi zinto zithathwe ezitshalweni ngezindlela ezihlukahlukene.
Yini enquma ikhwalithi yamafutha abalulekile
Ikhwalithi yamafutha abalulekile ancike, okokuqala, endleleni abakhiqizwa ngayo. Amafutha aphezulu kakhulu atholakala nge-distillation ngamanzi omphunga. Ngalendlela yokuthola amafutha, izitshalo zikhishwa eziqukethe izimpande, amaqabunga, izinkuni, njll. Amafutha abalulekile aqukethwe ngezithelo ze-citrus atholakala nge-solvent extraction method. Kodwa ngisho namafutha aphezulu kakhulu anenani eliphansi le-solvent. Kusukela ekuqinisweni kwenqubo yezobuchwepheshe ekukhiqizeni amafutha abalulekile ukuthi izinga labo lixhomeke ngokuqondile. Isibonelo, uma amafutha e-citrus abalulekile ewumkhiqizo we-juice ukukhiqizwa yi-centrifugation, amafutha asemqoka asemqoka afaka ukungcola nokubhujiswa atholakala ngokushesha. Ikhwalithi yamafutha atholakala ngokushisa okucindezelayo ikhasi eliphakeme kakhulu kunalowo odlule futhi libiza ngaphezulu.
Indlela yokukhetha amazinga asemqoka kanye nemvelo yemvelo
Inkomba ebaluleke kakhulu yekhwalithi yamafutha abalulekile iyinani labo. Kula mafutha, inani lokuthengisa ezitolo kufanele libe liphakeme kunanini lapho uthenga khona ku-intanethi. Amafutha abalulekile kakhulu, athengiswa ezitolo ezifuywayo, imikhiqizo ithengwa phesheya, futhi sinamabhodlela.
Isibonisi sesibili esithonya ukukhethwa kwamafutha abalulekile ukulinganisa kwezinhlobo ezithile zamanani wamafutha kumkhiqizi oyedwa. Inani lokuqala lemikhiqizo cishe lilinganayo kubo bonke. Isibonelo, i-geranium, i-ylang, njll. Amafutha kufanele abe kubi kakhulu kunesihlahla setiyi noma i-orange. Okubiza kakhulu kuyoba amafutha abalulekile sandalwood, chamomile.
Isibonakaliso esilandelayo, esikhetha i-oli edingekayo yemfanelo - yiklamo yezimpahla. Kulebuli kumele kube khona: okubhalwe ngu-100% i-artifisches, i-100% ehlanzekile noma i-100% yamafutha abalulekile (igama lesiLatini lezitshalo). Ibhodlela kufanele lenziwe ngilazi emnyama - amafutha emvelo azwela ukukhanya. Ibhodlela kufanele libe ngu-2 no-5 ml wamafutha abizayo futhi kune-10 ml ngayinye, kufanele kube nomthengisi. Futhi kulebula kufanele ibe: impilo yeshalofu, umakhi, izimo zokugcina, njll.
Ukuze ukhethe amafutha abalulekile aphezulu, udinga ukulalela "ekhaleni lakho." Uma uthenga amafutha okutshala owaziyo - unquma ngokuthi "impumulo", njengenhlama yesitshalo esithile, zama ukuthola ukuthi kukhona yini utshwala noma ukufakelwa kokufakelwa emafutheni. Njalo iphunga lemvelo lishintshwa kancane. Khipha ngokushesha amanothi alula, avela iphunga elibukhali futhi elisha liphendukela ku-tart ngaphezulu. Khona-ke kancane kancane kunamakha amanothi acindezelayo avela. Iphunga elimnandi, ngokungafani namafutha abalulekile emvelo, lizoncipha. Lapho ukhetha amafutha abalulekile okokuqala, kunzima ukukhomba ama-nuances anjalo. Ungaqhuba ukuhlolwa okukhethekile. Thatha amaphepha amaphepha amathathu, ngoba ngamunye awela amafutha afanayo afanayo, kodwa ngokubambezeleka kwesigamu sehora. Iqabunga ngalinye kumele lize ne-flavour ehlukile.
Isizathu esilandelayo, lapho ungakhetha khona amafutha ekhwalithi - kukhona olunye uhlolo. Kudingeka iphepha ukuze kuhlolwe ikhwalithi yamafutha ngebala. Dweba ihlumela lamafutha kuleliphepha. Uma amafutha abalulekile anemfanelo ephezulu, ibala lizophuma ngokuphelele, lingashiyi lutho. Uma kwenzeka kukhona ibala emaphepheni, amafutha aqukethe iphunga elizenzekelayo elithwa ngamafutha anamanco. Kodwa kunamafutha anemvelo kanye nekhwalithi ashiya ama-oily okhanyayo ephepheni. Lona impepho, imure, sandalwood.
Kungcono ukuthenga amabhodlela amabili ngamafutha okubalulekile kunama-synthetics ashibhile. Ukukhetha amafutha abalulekile kuyadingeka ngezinhloso ofuna ukuzifeza. Ikhwalithi kanye namafutha abalulekile emvelo kufanele abe emaphaketheni afanele futhi intengo yabo ngeke ibe ngaphansi.
Indlela yokubuyisela izingubo ezimnyama zombala
Ungazibeka kanjani esimweni lapho ubheke ukhathele?
Ungubani owesifazane noma indlela yokuphakamisa ukuzethemba?
Indlela yokukhetha umenzi we-crepe
Indlela yokukhetha ifenisha efanele, iseluleko esiwusizo
Amakhowe nemifino nesinaphi
Unganquma kanjani ingane eneminyaka engu-40 ubudala
Indoda eshadile: indlela yokuwina futhi ungaphuthelwa
I-Salmon ngesi-sauce saseShayina ebhaka kuhhavini
Ukudla kwase-Chinese izinsuku ezingu-21
Umyeni nomunye umuntu oyedwa. Izimfihlo zomsebenzi ohlangene
Imikhonzo yamaNazi ka-Elizabeth II yabangela ukuhlukumezeka
U-Natalia Sturm wakhohliswa ngesihluku ohlelweni lukaShepeleva
Izibhamu nge imbewu ithanga